Nagu saabsan |
Gogosha Roogga Car
Shaoxing Huawo Auto Qaybo Co., Ltd.
Waxaan ahayn shirkad xirfadlayaal ku takhasusay sameynta, qaabeynta iyo horumarinta qalabka gawaarida. Gudaha2004, Huawo waxay bilawday soo saarida alaabada TPO / TPE, dermaha baabuurta, gogosha sariirta, roogaga iyo Car Sound Deadening Mat, sababtuna waxay tahay waxaan haysanaa waaxda ceyriinka iyo waaxda horumarinta wax soo saarka.
Gogosha baabuurka ee TPE / TPR waa tayada ugu fiican suuqa, waa Eco-friendly, Anti-siibi, waxayna bixisaa dhammaan ilaalinta cimilada, ka ilaali gaarigaaga wasakhda, dhoobada, cusbada, roobka iyo barafka. Waana 100% caadiyan ku habboon gaarigaaga, waxay nolosha ka dhigaysaa mid fudud oo nadiif ah.
Iyadoo dhowrkii sano ee horumarka xawaaraha sare, waxaan dhisnay wax soo saarka u gaarka ah iyo nidaamka maaraynta tayada kaamil ah iyo shaybaarka caadiga ah. Hadda waxaan siineynaa sariirta gawaarida iyo Sariirta Car Carida ee loo yaqaan Volkswagen iyo Toyota.
Maaddaama ganacsigeenna iyo macaamiisheennu koray, waxaan leenahay hamigeenna ah soo saarista iyo keenista qalabka baabuurta ee tayada sare leh suuqa.
Waxaan haynaa mashiinka alaabada ilaa sheyga ugu dambeeya. Waxaan bixinaa Adeeg xirfad leh iyo waqtiga ugu fiican ee macaamiisha oo dhan.
Waxaan kula joogi doonaa si aan u dhisno xiriir saaxiibtinimo oo muddo-dheer oo iskaashi ah.
All-Weather xamuulka liner for Tesla Model Y ...
Tesla Model 3 3D Xamuulka Liner Rear jirridda Mat